Ukushisa kuthinta kanjani izilwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
USergio Gallego | | Isimo Sezulu, Amagagasi okushisa
Izilwane njengabantu, nazo bahlupheka futhi bahlushwa amazinga okushisa aphezulu kubangelwa igagasi lokushisa. Lokhu kushisa okukhulu ngokweqile ngaphezu kwama-degree angama-40 kungadala ukufa okungazelelwe kanye nokwehliswa kwenani lalezo zinhlobo ezizwela kakhulu ukushisa okuminyanisa. Ngezansi ngichaza ngokuningiliziwe ukuthi kuthinta kanjani lokhu amazinga okushisa aphakeme kakhulu izinhlobo ezinjengezinyosi noma izinyoni.
Uhlobo olulodwa olubhekene nalokhu kukhuphuka kwamazinga okushisa izinyosi, njengoba ukushisa kubangele ukuthi izimbali zome futhi ungakhiqizi umpe badinga izinyosi ezinjalo. Lokhu kudale ukuthi ukukhiqizwa koju kwehle kulo nyaka kuze kufike ku-60% ngaphansi kuka-2014.
Ngokuhlobene ezinyonini, kusesekuseni kakhulu ukwazi ngemiphumela yokushisa okushisayo kuzo, ngoba kulezi zinyanga zikhona ngenkathi kwenziwa kabusha. Kunoma yikuphi, ukushisa okukhulu kubangela isomiso esiningi namanzi amancane ukuze lezi zinhlobo zikwazi ukondla kahle amaphuphu azo, okunomthelela omubi kuzo inani lezinyoni.
Ukuzivikela emiphumeleni ye- amazinga okushisa aphezulu, izinyoni zivame ukusebenzisa izimpaphe noqhwaku lwayo ukulawula ukushisa komzimba wakho. Izinyoni ezihlala edolobheni zinethuba elingcono lokusinda kunalezo ezihlala endle ngoba zine ukudla namanzi ngendlela efinyeleleka kalula futhi elula.
Kepha imiphumela yokushisa ezilwaneni, kuya ngomzimba wazo namandla. Ngale ndlela, izinja ziyazwela impela amazinga okushisa aphezulu futhi bafuna ukuxhumana nomhlabathi ukuze bapholise kancane. Izilwane eziningi ziziphatha kakhulu njengabantu futhi zivame ukwenzeka bheka isithunzi nezindawo ezipholile ukugwema ukushisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Ukushisa kuzithinta kanjani izilwane